Ndege dzakachipa nendege, tenga matikiti pamutengo wakanakisa! ?
Tsvaga mitengo yakanakisa yendege uye nezvose zvivimbiso Kutenda kune yedu yakachipa yendege yekutsvaga injini.
Flights Flights Kutsvaga
Asi pane zvimwe zvingasarudzika paInternet, saka tinokupa mukana wekutsvaga kutsvagisa kwendege uye mawebhusaiti ekuenzanisa.
Destinia: Nekuda kweiyi injini yekutsvaga tinogona kuwana nendege nemutengo wakanaka uye nechivimbiso chakazara. Dzvanya apa
Rumbo: Injini inozivikanwa yekutsvaga hotera zvakare inokupa iwe chishandiso chekutenga zvakachipa kwazvo nendege. Dzvanya apa.
Skyscanner: Imwe yedzinonyanya kutsvaga injini uye ine mukurumbira mukurumbira wekutsvaga yakachipa mitengo. Kana iwe uchida kuona kuti zvinoshanda sei iwe unotofanira kudaro tinya pano.
Lufthansa, ndege yendege yeGerman uye inova ndiyo huru muEurope. Pawebhusaiti yayo unogona kuwana zvakanakisa nendege mukati mekupa kwayo kukuru. Dzvanya apa.
eDreams, rimwe remasangano makuru ekufamba munyika, rinopa ndege dzakasiyana siyana nemitengo yakanakisa. Bhuka kutiza kwako navo kupinda apa.
Chero nguva yekuti mazuva ekuzorora kana ezororo achisvika, zvinoitika kwatiri kuti tibude munzira. Ndeipi nzira iri nani pane kusvika pakuziva dzimwe nzvimbo. Kana makore mazhinji apfuura taive nungo, nekuda kwekuita rwendo rurefu rwemazuva akati wandei, nhasi izvo hazviitike futi. Kutenda nendege, tichava patiri kuenda pasina kana nguva. Kana kune uyu mukana mukuru isu tinowedzera iyo cheap flights iyo yatinogona kuwana pawebhu, tichava tatova nechikamu chemazororo edu akarongeka.
Matipi epamusoro ekutsvaga nendege dzakachipa
Iva anochinjika: Imwe yesarudzo dzakanakisa kana zvasvika pakutsvaga ndege inobata, ndipo patisingatarise musi wakatarwa. Ndokunge, tese tinoziva kuti mwaka wepamusoro unoenderana nemwedzi waNyamavhuvhu uye mazororo enyika. Naizvozvo, kana iwe uine rombo rakaringana rekugona kutiza kunze kwavo, saka chokwadi uchaenda kunoponesa zvakawanda kupfuura zvaunofunga pane yako tikiti yendege.
Mitikiti zvakasiyana: Dzimwe nguva, bhuku tikiti kuenda nekudzoka haisi mhinduro yakanakisa. Tichawana mari patinochengetera matikiti acho zvakasiyana. Ehezve, chekutanga pane zvese uchafanirwa kutarisa zvakanyanya, nekuti haazi makambani ese ane hunyengeri uhu.
Zviyero: Kunyangwe iyo kumbomira panzendo Vanogona kuva chigumbuso chikuru, mune iyi nyaya, vanogona kutova ruponeso rwedu. Izvi zvinodaro nekuti mutengo wayo wakaderedzwa zvakanyanya.
Maawa: Pasina kupokana, maawa anogona zvakare kukanganisa muhomwe yedu. Kana usiri kukurumidza kune rimwe zuva, zvirokwazvo iyo nguva haizove chinotadzisa kana. Saka, iwe unogona kuchengetedza yako nendege dzakaderera mutengo kana ukasarudza chinhu chekutanga mangwanani kana husiku. Dzimwe nguva zvinoitika kuti mitengo inenge iri pasi zvishoma. Iwe unongoda kuzvitarisa!
Ndira, Kukadzi naNovember vanova iyo yakachipa mwedzi yekufamba. Nekudaro, iwe unogona kugara uchienda kunotarisa kumazuva avo uye kuita kubhuka panguva iyoyo. Ehezve, kana iwe uine mazuva ekuenda, iwe unogona kugara uchichinja zvishoma iro zororo raunaro mupfungwa.
Maitiro ekuverenga ndege online
Bhuka ndege online, Ndiro rimwe remabasa anogona kuitwa nemunhu wese, kunyangwe pasina zano rakawanda reinternet. Uye zvakare, iwe unogona kusevha vamiririri, kumirira uye mamwe maitiro. Haufunge here kuti zvakakosha?
Chekutanga pane zvese, zvakanakisa zvatingaite kuenda kune a muwani wekufamba nendege senge atakusiira pakutanga kwenyaya ino. Ikoko tinogona kusarudza zvese zuva nenzvimbo yatinoda kushanyira uye isu tichawana dzakateedzana sarudzo, dzakarairwa nemitengo yavo uye nemakambani ekubhururuka. Iri basa rakareruka kwazvo ratinenge tave naro pamberi pedu mune nyaya yemasekondi.
Seinjini dzekutsvaga iwe unogona kushandisa ese Skyscanner uye Rumbo kana Destinia, pakati pevamwe. Dzese dzicharerutsa iwe mitengo yakanakisa yemakambani chinonyanya kuzivikanwa. Iwe uri mumaoko akanaka!.
Kana tangova nesarudzo, iko iko kurovedza kwekuziva kunotanga tinofanirwa kubhuka rinhi. Sezvo isu tiri kuronga zororo, hatisi kukwanisa kusvika nekukwira. Kwete, nekuti tinofanirwa kugadzirisa mutengo zvishoma. Kuti uite izvi, iwe zvaunofanirwa kuziva ndechekuti, sekutonga kwakawanda, angangoita mavhiki manomwe mutengo wetikiti usati wave unodhura ne10%. Ehezve, kana isu tiri kukurumidza kukuru, iwe unofanirwa kuziva kuti tikiti pazuva rimwe chetero rekuenda rinogona kunge rakawedzera mumutengo unosvika kusvika ku30% zvimwe.
Paunenge iwe watora matanho makuru ekutsvaga, kusarudza uye kusarudza kwaunoenda. Ikozvino zvinongoramba zviripo kuti zviitise pachako. Kana wapedza, ivo vanokutumira iwe yekusimbisa email kune iyo tsamba iyo yawakapa. Yako tikiti nhamba uye yekuchengetedza kodhi ichaonekwa ipapo.
Ndezvipi zvakanakira kubhuka ndege online?
Tinoziva kuti kune akawanda zvakanakira kugona kubhuka ndege online. Pasina kupokana, kunyaradzwa chinhu chichagara chichitiperekedza. Hazvina kufanana kuti uende kusangano uye kunopedza mangwanani ese uriko pane kunyatsogara pasofa kumba. Ehezve, pamusoro peizvozvo, isu tine vamwe izvo zvinofanirwa kutaurwa.
Mashoko: Ehe, ruzivo rwacho rwakanyanya kuwanda. Izvi zvinodaro nekuti nekuda kwekutsvaga injini iwe uchakwanisa enzanisa nemakambani akasiyana, pamwe nekunakidzwa nekuenda kwakawanda uye zvese zvaunoda kuti uzive.
Hapana purogiramu: Usazvidya moyo kana ukaswera uchishanda uye paunosvika, iyo rwendo rwekufamba yakavharwa. Fema, zorora zvishoma, uye batidza komputa. Ikoko iwe unowana zvese zvauri kutsvaga. Iwe unogona kuteedzera kana kuiongorora mangwana acho kana iwe uchida kutora nyowani kutaridzika.
Mitengo: Sezvo tanga tichitaura, chimwe chinhu chinogara chichitinetsa mitengo. Mune ino kesi, hakuzove neanomiririra uye isu tinogona kugara tichisangana neavo zvinopfuura zvinopa zvinobatsira. Ehe, yeuka kuti iwe unofanirwa kugara uine chokwadi chemutengo wekupedzisira, kana mari dzese dzinoenderana dzawedzerwa. Kunyange zvakadaro, zvichave zvakachipa online.
Kana iwe uchida kuenda kuLondonIpapo iwe unofanirwa kuziva kuti kuti uwane nendege dzakachipa, iwe uchafanirwa kuita yako yekuchengetera anenge masvondo manomwe pamberi porwendo. Naizvozvi, iwe unogona kunge uri kuchengetedza ingangoita 20% yemutengo. Ehezve, kune izvi, isu tinogara tichikurudzira kuti utange kutarisa nekukasira uye pamusoro pezvose, kuti iwe enzanisa. Dzakanakisa kudhura nendege nzendo dziri muna Chivabvu naSeptember.
Kana iwe wakasarudza kudanana, saka pamwe Paris ndiyo nzvimbo yako yakanaka. Nzvimbo yaunogona kuwana inonakidza nzvimbo. Saka kuti iwe ugare uchivarangarira uye kwete, nekuti yaive ndege inodhura, saka unogona kutanga kuita chengetero chako kwakatenderedza vhiki gumi usati warwendo. Mwedzi yakanakisa yekuona Paris ndiyo mwedzi waGunyana naGumiguru.
Ndege dzakachipa kuenda kuRoma
Kana iwe uchida shanyira romeIwe zvakare uchafanirwa kunyorera yako ndege tikiti mwedzi nehafu pamberi. Nenzira iyi iwe uchawana mitengo inodhura. Zvakare, yeuka kuti Chivabvu naJune mwedzi yakakwana, ine yakaderera kudiwa.
Ehupfumi Ndege kuenda kuMadrid
Tsvaga a kutizira kuMadrid icho chinhu chakakurumbira uye chiri nyore. Nhandare dzese dzakabatana nazvo. Saka, zvirokwazvo iwe uchatokwanisa kuwana akati wandei uye panguva dzakasiyana kwazvo. Zviri nani kugara kure nemaawa makuru nemazuva akaita Chishanu kana Muvhuro nekuti mitengo iri chokwadi kukwira kumusoro.
La Barcelona zvakare yakanyatsobatana. Ose ane ndege dzenyika neyekunze. Saka kuenda kwariri harisi dambudziko. Dzimwe nguva iwe unowana dzimwe nzendo pamwe nekumira kwavo, asi zvinogara zvakanaka kutora mukana kuti uone kana tichigona kuchengetedza mashoma maeuro. Sarudza nguva apo pane kudirana kushoma uye iwe uchaona kuti yakachipa zvakadii kupfuura iwe zvaunofunga.